Download I-Applock - Izinhlelo Zokusebenza Zokukhiya, Ukuvala Iphini Nephethini Apk Latest Version App For Android Devices
izinhlelo zokusebenzaUkukhiqizai-applock - izinhlelo zokusebenza zokukhiya, ukuvala iphini nephethini
I-🔒applock: vala izinhlelo zakho zokusebenza nezithombe, ukubamba abasebenzisi futhi uvikele ubumfihlo bakho.
4.7 (94.6%) 327,260 Amavoti
I-Applock - I-Pin & I-Pattern Lock , enye ye-app ewusizo ikhiye izinhlelo zokusebenza zakho, ezizovikela ubumfihlo bakho ne-App lock, I-Break-in alert (Intruder selfie), Fihla Applocker, futhi uyifihle ukukhiya (AppCover ). Uhlelo lokusebenza lwezinhlelo zakho zokusebenza luhlanganisa izici zokuphepha eziphakeme futhi lunikeza ukuvikeleka kwefoni yakho. I ivimbela ukufinyeleleka okungagunyaziwe futhi inikeza ukulondoloza ubumfihlo, igcina ifoni yakho ivikeleke ngokwengeziwe!
kulula ukuyisebenzisa! Ukulondoloza Ubumfihlo Imfihlo Yakho!
💎 Ukukhiya uhlelo lokusebenza - I-Applocker, iphasiwedi yokukhiya, ukukhiya iphethini kusekelwe.
💡 Igalari Yokukhiya - I-Applock ivala igalari yezithombe zakho namavidiyo wakho wangasese.
💡 Izaziso zokungena ngemvume - Vimbela abangenayo abazama ukuvula isikrini sakho sohlelo lokusebenza.
💡 Vimbela ukukhiya - Fakela isikrini sokuvula ibe umbiko wephutha.
💡 Fihla I-AppLock Icon - Guqula isithonjana sokukhiya uhlelo lokusebenza ku-calculator. Akekho omunye ongathola i-AppLock.
💡 I-Phone Cleaner - Hlanza amafayili angcolile, amafayela we-APK.
🔒 <u> Izikhiye zokusebenza - Ungakhathazeki ngabanye hlola imfihlo yakho
Applock ukwesekwa lokusebenza ukwesekwa ngephasiwedi lock, iphethini lock. Ukuhlinzeka nge-othomathikhi yokuvala isipiliyoni ngokuvikela ubumfihlo. Qapha idatha yakho yangasese ukugcina ifoni yakho nohlelo lwakho luvikelekile. Awudingi ukukhathazeka ngokuthi izingane zakho zilahla ifoni yakho ngenkathi idlala imidlalo.
🔐 <u> Vala izinhlelo zokusebenza - Ukuvala izinhlelo zakho zokusebenza ezizimele / ezibucayi nge-locker lokusebenza!
Ngesici sokukhiya uhlelo lokusebenza, ukukhiya uhlelo lokusebenza kungavala izinhlelo zokusebenza efonini yakho, njengekhibhodi ephephile, othintana naye njll. Ukuhlinzeka ngokukhiya okusebenzayo okunokwethenjelwa nge-Multiple Lock Styles futhi kukusiza ukuthi uthathe umgibeli ofuna ngasese ukuvula uhlelo lwakho lokusebenza ngaphandle kwemvume yakho.
📸 <u> Thola U-Intruder - Ufuna ukuthola ukuthi ubani ozama ukukhipha izinhlelo zokusebenza zakho zangasese?
Ngemvume yekhamera, i-Applock izothatha isithombe somuntu ovula izinhlelo zokusebenza ngephasiwedi engafanele. Isithombe sizoboniswa kuwe kuphela ukuze ubambe lo curious!
🔢 <u> Fihla uhlelo lokusebenzaLock icon - Ungalokothi ukhathazeke ngokuvula uhlelo lwakho lokusebenza locker lohlelo lokusebenza!
I-Lock Lock isekela ikhono lokushintsha isithonjana se-AppLock kwisithonjana se-Calculator. Fihla uhlelo lokusebenza lokusebenza oluvimbela abantu abangaziwa ukuthi bangatholi uhlelo lwakho lokusebenza lokusebenza lokusebenza nokukhipha ngaphandle kwemvume yakho.
🎭 <u> Fihla ukukhiya - Ungalokothi ukhathazeke ngokufakazela ukuthi uhlelo lokusebenza luvaliwe!
Ngokukhiya okungaqondakali, ungasetha isikrini sokukhohlisa ukuze uvimbele abafaki ukucindezela, noma bezama ukungena kuzinhlelo zakho zokusebenza. I-intruder izobona kuphela umyalezo oyiphutha noma iwindi lesiphambeko sephutha, njengokuthi "into engahambanga kahle", esikhundleni sohlelo lokusebenza langempela. Nguwe kuphela owazi ukuthi ungene kanjani kahle uhlelo lokusebenza.
✨ <u> I-Phone Cleaner - Zama lo Mphathi Wefoni!
I-Applock iyasiza futhi ukususa amafayela angenayo, i-residual kanye nefayela le-APK. Ngokufunda / ukubhala izimvume zesitoreji zangaphandle, i-AppLock ivumelekile ukuskena nokususa amafayela angenalutho agcinwe ekhadini lakho le-SD.
🎊 <u> Ukwaziswa Komsebenzisi Okungcono - Nikeza isevisi elula kakhulu
I-Applock inikeza izinsizakalo ezinembile kakhulu, amasevisi asendaweni ngendawo, indawo eyingozi futhi uthole izimvume ze-akhawunti, ekhonza umgomo wokuthuthukisa isipiliyoni somsebenzisi.
🌟 I-Applock, ikunikeze ukuvikelwa kwangasese! 🌟
📮 Xhumana Nathi
Sicela ukhululeke ukufinyelela ngaphandle kwanoma yikuphi ukusikisela kanye nempendulo ku-imeyili ngezansi:
i-invincibull vpn - ephephile. eyimfihlo. angenakunqotshwa.
i-vpn yamahhala nge-freevpn.org
umfundi we-pdf, umbukeli we-pdf nomfundi we-epub mahhala
igama lomshayeli kanye nendawo
i-solo vpn - eyodwa ye-tap proxy yamahhala
ikhibhodi ye-kika ye-vivo
i-office viewer - ihhovisi le-docx ne-pdf reader
khuluma nokuhumusha - ukuthayipha ngezwi nomhumushi
ukukhiya uhlelo lokusebenza
khulula ukufihla futhi ufune crazy umakhelwane game guide
thola umlando wocingo-thola imininingwane yocingo nganoma iyiphi inombolo
shayela i-voice changer yindoda ku-wesifazane